တရုတ်စက်ရုပ် HY1020A-200 စက်တင်သွင်းသူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသည့်စက်ရုံ Yunhua
HY1020A-168 သည် ၆ ခု ၀ င်ရိုးစက်ရုပ်ဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်တင်နှင့်ချရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် numerical control system ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောစက်မှုလက်မောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပူးတွဲတစ်ခုချင်းစီ၏စတီယာရင်အင်ဂျင်ကိုထိန်းချုပ်။ အနိမ့်စက်သို့ညွှန်ကြားချက်ပေးသောလူ့ - ကွန်ပျူတာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာအကူအညီဖြင့် HY1020A-168 စက်ရုပ်သည်အလိုအလျောက်တင်ဆောင်ခြင်းနှင့်ချခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လက်ဖြင့်တင်ခြင်းနှင့်ချခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအစားထိုးနိုင်ပြီးအလိုအလျောက်တင်ဆောင်ခြင်းနှင့်ချခြင်းစနစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အလွန်ထိရောက်သောအလိုအလျောက်စက်ရုပ်အဖြစ် HY1020A-168 သည်တည်ငြိမ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ခြင်း၊ တိကျမှန်ကန်သောနေရာချထားခြင်း၊ ၎င်းသည်ထုတ်ကုန်တစ်ခုတည်းထုတ်လုပ်မှုတိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်စေပြီး၊ အမြောက်အများထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြန်စေပြီးလုပ်ငန်းသစ်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များနှင့်အညီမြန်ဆန်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေနိုင်သည်။
6 20KG ± 0.08mm 8.0KVA 0-45 ℃ 20-80% RH (နှင်းခဲမရှိ) 330KG မြေပြင်, တင် IP54 / IP65 (ခါး)
လုပ်ဆောင်ချက်အတိုင်းအတာ ± 170 ° + 80 ° ~ -150 ° + 95 ° ~ -72 ° ± 170 ° ± 120 ° ± 360 °
Maxi မြန်နှုန်း 150 ° / s 140 ° / s 140 ° / s 173 ° / s 172 ° / s 332 ° / s
A. စက်ရုပ်စက်များအတွက်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ချခြင်းအားစက်ရုပ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်လုပ်ငန်းခွင်ကိုလှန်လှောချပြီးကုန်ချချခြင်း၊
စက်ရုပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတင်ခြင်းနှင့်ချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
A. စက်ရုပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ချခြင်းစက်ရုပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးမြင့်နိုင်သည်။ စက်ရုပ်သည်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကို ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်စေသည်။
A.Vision သည်ခါးပတ်သယ်ဆောင်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ YOO HEART စက်ရုပ်ကိုသင်သိသည့်အပေါ်အခြေခံသည်။
စက်ရုပ်တင်ရန်နှင့်ချရန်အတွက် payload မည်မျှရှိသနည်း။
A. စက်ရုပ်ကို တင်၍ ချခြင်း၊ စက်ရုပ်ကိုရွေး။ နေရာချခြင်း၊ ဤအလုပ်အတွက် 3Kg မှ 165kg သို့ YOO HEART စက်ရုပ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ 10kg နှင့် 20kg မကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။
ကျွန်ုပ်၏ CNC စက်များအတွက်အဘယ့်ကြောင့်စက်ရုပ်ကို တင်၍ ချရသနည်း။
A. ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုပ်စက်ရုပ်သည်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုတိုးတက်စေသည်။ စက်ရုပ်အစာကျွေးခြင်းသည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးမြှင့်စေပြီးပိုမိုလှုံ့ဆော်မှုရှိသောအသီးများသောအလုပ်အတွက်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကိုအခမဲ့ပေးလိမ့်မည်။
ရှေ့သို့ ပန်းချီစက်ရုပ် HY1010A-143
နောက်တစ်ခု: နှစ်ခုဝင်ရိုး Rotator